PSG Oo Ka Taqalustay United , Guul Daraddii Ugu Horeeysay Ayay Tababare Ole Qoorta U Soo Sureen Xilli Pogba Uu Qaatay Kaarka Cas | xushmo.com
PSG Oo Ka Taqalustay United , Guul Daraddii Ugu Horeeysay Ayay Tababare Ole Qoorta U Soo Sureen Xilli Pogba Uu Qaatay Kaarka Cas
Man United iyo PSG ayaa nasiinada ku aaday bar bar dhac bilaa goolal ah xilli qeybtaas hore ay jireen fursado ay iska qasaariyeen labada dhinac xilli United ay ku sareysay .
Guud ahaan labada koox waxaa ka muuqday in ay kala baqayeen oo ma jiirin koox si weyn ugu dhiiraneysay weerarada tooska ah balse guud ahaan ciyaarta waa u furneyd labada dhinac.
Qeybtaas hore xaraarad uma laheyn sidii loo filanayay ka hor kulanka balse qeybta labaad waxaa la filan karay is badal waxaana qeyebtaas hore hareeyay qaladaad oo illaa 5 kaarka digniinta ayay kala qaateen labada koox .
United dhamaadkii qeybtii hore waxaa dhawaac looga saaray Lingard iyadoo xilligaas la soo giliyay Sanchez waxaana nasiinada lagu aaday bar bar dhac bilaa goolal .
Qeybta labaad , biloowgii waxa ay PSG ay ku haleeyeen United fursado waxaana dhaq dhaqaaq wacan waday Kylian Mbappe kaasi oo qeybtii koowaad horay u sigay shabaqa United .
Waxa ay u muuqdeen PSG , kuwo ku soo balamay in ay ka yaabsadaan United waxa ayna kubadda ku jiidayeen goosha illaa ugu dambeyn ay keeneen gool daqiiqaddii 53-aad waxaana saxiixay Presnel Kimpembe .
Ka dib goolkaas United waxa isku dayayeen in kubadda jiidaan ayna waqti hore keeneen balse sidii la rabay ma aheyn taasi badalkeedana PSG weerarkii ayay sii xoojiyeen ilaa ay ka keeneen gool labaad daqiiqaddii 60-aad waxaana markaan saxiixay Kylian Mbappe .
Inkastoo United goolkaas labaad lagu helay hadana ma aysan niyad jaban waxa ayna duullaan ku ahaayeen goosha PSG balse daafac adag ayaa hor taagnaa oo kubadda meel ay marsiiyaan ma laheyn.
Qeybihii dhamaadka xigeenka , United ayaa kubadda ku badneyd halka PSG ay ku tiirsanayeen kubadaha baxsadka ah balse waxaa United ka maqnaa in ay dadaalkooda u turjumaan goolal .
Harerra iyo Mata ayaa isku dayo wacan waday balse daafaca PSG ayaa adkaa xilli dhamaadkii kooxda reer France ay mararka qaar kubadda uga badnaayeen kooxda United waxa ayna daqiiqaddii 54-aad soo giliyeen Lukaku oo loo badalay Rashord balse waxa uu badalkaas u muuqday mid soo daahay.
Ciyaarta ku dhamaatay labadaas gool ee ay guusha ku raacday PSG , waana guul daradadii ugu horeeysay ee qabsata tabaraahaan cuusb ee United halka PSG noqotay kooxde ugu horeeysay ee France ah ee ku soo badisa qalcadda Old Tarfford xilli Pogba kaarka cas uu qaatay daqiiqadii 89-aad